Ballerinas, akpụkpọ ụkwụ dị mma iji ọsọ na -agba ụbọchị anwụ | Bezzia
Ballerinas, akpụkpọ ụkwụ dị mma iji mee ọsọ ụbọchị anwụ
Maria onyekwere | 11/10/2021 18:00 | Kedu ihe m ga-eyi, Akpụkpọ ụkwụ
Ndị na -agba egwu bụ otu nnukwu ihe ọzọ na ọkara oge iji mechaa ekike anyị. Dị ka moccasins, nke anyị kwuru maka ya n'oge na -adịbeghị anya, akpụkpọ ụkwụ ndị a dị larịị na -enye anyị nkasi obi dị ukwuu n'ụbọchị anyị.
N'ime ụbọchị anwụ na -acha, anyị ka nwere ike iyi ndị ịgba egwu anyị n'ụkwụ efu. Agbanyeghị, tupu ewepụ ha na kaboodu, ọ ga -adị mma ka anyị jiri sọks dị gịrịgịrị. Na iji mezue ụdị uwe niile, ya na akwa jeans, akwa ma ọ bụ uwe mwụda.
Ndị na -agba egwu bụ a akpụkpọ ụkwụ dị mfe ma dị mma. Ọbụlagodi maka imirikiti, ewezuga ụdị na -enweghị ikiri ụkwụ dị ala. Ndị a abụghị ihe kacha atụ aro maka ịga ebe dị anya, n'agbanyeghị na a na-ekwukwa otu ihe ahụ maka flip-flops ma enwere ndị nwere ike soro ha gaa ụwa niile. Mana ka anyị ghara ịkpafu.
Na -anọpụ iche na agba ọtọ, ndị na -agba egwu na -aghọ ndị enyi jikọrọ aka iji mechaa uwe anyị. Anyị hụrụ ha n'anya na jeans na uwe ogologo ma ọ bụ akwa mmiri ozuzo, Nchikota na-apụ apụ nke nwere ike ịrụ ọrụ awa 24 kwa ụbọchị. Ị nwekwara ike họrọ uwe elu nwere akwa na cardigan setịpụrụ, dabara adaba n'oge a n'afọ.
Ọ bụrụ na enwere onye maara ka esi erigbu ngwakọta ndị a n'ụzọ zuru oke, ọ bụ Anouk Yve, onye ị ga -arịa ọrịa nke ịhụ na Bezzia. Ị nwere ike ikwenye karịa ma ọ bụ obere na -atọ ya ụtọ mana ọ bụ nnukwu isi iyi nke mmụọ ma a bịa mepụta uwe ndị bụ isi maka ụbọchị anyị.
Ị nwekwara ike ijikọta ndị na -agba egwu uwe mwụda na skirts, iji nweta ụdị ejiji nwere ihunanya dịka nke a Van y Maria Ruiz. Naanị ị ga -achọ blazer ma ọ bụ cardigan na ụda na -anọpụ iche iji mezue anya gị. Ị na -achọ ihe dị nkenke na nke dị ize ndụ? Jenny Walton nwere igodo. Nwee obi ụtọ na uwe mwụda nwere agba mara mma ma jikọta ya na ballerinas dị iche, ị gaghị ahụ ya!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Kedu ihe m ga-eyi » Ballerinas, akpụkpọ ụkwụ dị mma iji mee ọsọ ụbọchị anwụ
Kedu ihe bụ kombucha? Uru nke trendy ọ drinkụ drinkụ